I-MEDIAPRO ikhetha i-Tedial for Corporate MAM ukuqaliswa - I-NAB Show News ngu-Broadcast Beat, Umsakazi Osemthethweni we-NAB Show - I-NAB Show LIVE
Ikhaya » Izindaba » I-MEDIAPRO ikhetha i-Tedial yokuqalisa ukusebenza kwe-MAM
I-MEDIAPRO ikhetha i-Tedial yokuqalisa ukusebenza kwe-MAM
I-MEDIAPRO iyakhetha Nciphisa kokuqalisa ukusebenza kwe-MAM
Ukuhanjiswa kwe-MAM yenhlangano kuzonikeza amandla ukuphathwa kokuqukethwe okwenziwa ngamasayithi amaningi
I-Malaga, i-Spain - i-9th September 2019 - Nciphisa, uchwepheshe ohola phambili wezixazululo zobuchwepheshe obuzimele be-MAM, uqokwe ngu-MEDIAPRO, umholi emkhakheni we-audiovisual Europe, ukuhlinzeka ngohlelo lwayo lweCorporate MAM ukuze lusetshenziswe ngaphakathi kwiQembu le-MEDIAPRO lezinkampani emhlabeni wonke. Ukuhanjiswa kwesistimu kuhlelwe ukuthi kuqale ngo-Septhemba 2019.
Isixazululo, i-MAM ye-multisite, sizonikezela ngezindawo eziningana ezizosatshalaliswa emhlabeni wonke ezinkampanini ze-MEDIAPRO Group kufaka phakathi iSpain, LATAM, North America, France, nokuningi. Isixazululo sizonika amandla opharetha be-MEDIAPRO ukuthola nokufinyelela okuqukethwe okuhanjiswa ngaphakathi kwesiza ngasinye kusiza ukuxhashazwa kanye nokusatshalaliswa kokuqukethwe kwabezindaba.
Isiza sokuqala ukuba yingxenye ye-MAM yenkampani yiGlobomedia, omunye wabakhiqizi bokuqala bokuqukethwe eYurophu, oseMadrid. I-Globalbomedia izokhipha ngokomqondo konke okuqukethwe kwayo, okuzokwabiwa ku Nciphisa IMAM. Lesi siza sizolandelwa enye i-MEDIAPRO Group yezinkampani emhlabeni wonke.
UJordi Pañella oyi-CEO ye-UNITECNIC, inkampani yokuhlanganisa izinhlelo ze-MEDIAPRO ithi, “Sikhethe NciphisaIsixazululo se-MAM yeCorporate njengoba ilungele zonke izinhlelo zethu zomhlaba eziya phambili. Ngokuhlinzeka nge-MAM enhlobonhlobo abahlinzeki bethu emhlabeni wonke bangabelana kalula ngokuqukethwe phakathi kwamasayithi anika amandla indlela yokukhiqiza ehlanganiswe ngokuphelele. ”
U-Esther Mesas, i-CSO / CMO, Nciphisa iyanezela, “Sijabule kakhulu ukumemezela lo msebenzi e-IBC 2019. I-MEDIAPRO iluhlobo lomhlaba wonke olunamasayithi emhlabeni jikelele. Inkampani yethu eyi-MAM izothuthukisa umkhiqizo, ithuthukise kakhulu ukuhamba komsebenzi futhi yehlise nezindleko. "
I-MEDIAPRO yi-a Multimedia iqembu lezokuxhumana elizinze eSpain namahhovisi egatsha eSpain, LATAM, USA, Canada, France nakwamanye amazwe emhlabeni jikelele. Isungulwe e-1994 e-Barcelona, ​​le nkampani ibandakanyeka ekwenziweni kwama-movie nethelevishini kanjalo nabezindaba (beIN Sports), esebenza emhlabeni wonke ngamahhovisi ayo e-58 asatshalaliswa kuwo wonke amazwe we-36 emazwenikazi e-4.
I-Saint-Petersburg Televishini Ikhetha i-Medialook VT Server Ekuhambiseni Ukuphakelwa Kwemisebenzi Emikhakheni Ekude - Novemba 25, 2019
I-FSR's Smart-Way Raceway Ihamba Ngaphansi - Novemba 21, 2019
I-Cobalt Encoder I-Digital Nirvana I-IBC ibc 2019 Ukuhlanganiswa I-MAM ukuqapha imidiya I-MEDIAPRO Ama-spears nama-Arrows I-subtitling umbhalo we-subtitling, i-Digital Nirvana, ukuqapha imidiya, i-IBC Nciphisa Ubuchwepheshe be-TV	2019-09-10
Ngaphambilini: Amasistimu wevidiyo we-TAG Akha Ngokumaketha Okuhola Emakethe, Ukuqapha kanye Nethala Lokulawula Okwenziwayo Ngokungeza Ukuxhaswa Kwezicelo Ezengeziwe kanye Nokunikeza Izici Ezihlosiwe Ezihlosiwe
Olandelayo: Umchwepheshe We-Audio